Ikhamera ye-4K WIFI yeBhanki yaMandla, iKhadi le-SD iMax 128G, umbono weBusuku (SPY175) | Izisombululo ze-OMG
HD 4KIsisombululo esiphakamileyo. Ungayibona ngokucacileyo into eyenzekayo ekhayeni lakho okanye eofisini xa uphumile. Ukufezekisa ukugcina iliso kukhuseleko lwasekhaya okanye ukubeka esweni into.
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO -Ukuba ikhamera ibhaqa nayiphi na intshukumo, ingathatha iifoto ezi-3 kwaye ithumele kuwe ifowuni ye-APP ngokuzenzekelayo. Ixhasa i-16.4-32.8 yeenyawo kumgama othe ngqo wokufumana intshukumo.
UMBONO WONYAKA -Yakha kwii-4 iibhalbhu ze-IR, i-10 yeenyawo zobude bombono ebusuku.
I-VIDEO LOOP RECORDING -Max inkxaso ye-128GB ikhadi le-SD elincinci, ukuxhasa ukujikeleza kwevidiyo nevidiyo yakudala ngokuzenzekelayo.
10000mAh IPOWER BANK Iziphumo ezi-2 ze-USB, ezinakho ukutshaja iifowuni ezimbini ngaxeshanye.
Ubungakanani bomkhiqizo: 5.59 x 2.83 x 0.51 (intshi)
Usayizi wephakheji: 6.85 x 3.94 x 1.14 (intshi)
Amandla eBhettery: 10000mAh
Ixesha lokuhlawula: Iiyure ze-8 okanye ngaphezulu
Ubude bexesha: Ukuhlawulwa kwe-iPhone7 2 Times okanye ngaphezulu; okanye uqhubeke ngokurekhoda malunga ne-20Hrs
Isombululo seVidiyo: 3840×2160/2160×1440/1920x1080p/1280x720p
Iimodyuli zevidiyo: Ukurekhodwa kweluphu kunye nokuchongwa kweMotion
Umbono ebusuku: Ewe
Ixesha kunye nomhla: -nokuhlengahlengiswa
Ikhono lokukhumbula: Ikhadi le-SD eliPhakamileyo eliPhezulu, i-1-128GB
6.9 x 3.9 x 1.2 intshi
12222 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-12 Namhlanje